Bọchị nne na Russia | Njem zuru oke
Motherbọchị nne na Russia
Isabel | 16/04/2021 11:32 | Emelitere ka 16/04/2021 12:34 | Rusia
Bọchị ndị nne bụ ụbọchị ezumike pụrụiche nke a na-eme n’uwa niile icheta ndị nne niile wee nye ekele maka ịhụnanya na nchekwa ha na-enye ụmụ ha site na mgbe a mụrụ ha.
Dịka ọ bụ emume mba ụwa, na mba ọ bụla a na-eme ya ụbọchị dị iche iche, agbanyeghị na onye isi izugbe na-abụkarị Sọnde nke abụọ na Mee. Otú ọ dị, Motherbọchị Ndị Nne na Russia na-ewere ọnọdụ na ụbọchị ọzọ. Ga-achọ ịma etu esi eme ya na obodo a?
1 Kedu ka ụbọchị nne si bụrụ Russia?
2 Kedu ka ụbọchị nne si bido?
3 Kedu mgbe a na-eme ncheta ụbọchị nne na mba ndị ọzọ?
3.8 Portugal na Spain
Kedu ka ụbọchị nne si bụrụ Russia?
Beganbọchị nne na Russia bidoro ime mmemme n’afọ 1998, mgbe ndị ọchịchị Borís Yeltsin kwadoro ya. Kemgbe ahụ, a na-eme ya na Sọnde ikpeazụ na Nọvemba kwa afọ.
Ebe ọ bụ na nke a bụ ememme ọhụụ ọhụụ na Russia, enweghị ọdịnala guzobere na ezinụlọ ọ bụla na-eme ya n'ụzọ nke ha. Ka o sina dị, ụmụaka na-eme kaadị onyinye na aka ọrụ aka iji kelee ndị nne ha maka ịhụnanya ha na iji gosipụta mmetụta ha.
Ndị ọzọ na-eme nri abalị ezinụlọ pụrụ iche ebe ha na-enye ndị nne ọmarịcha okooko osisi ọdịnala dị ka akara ngosipụta nke ekele ha, tinyere ozi ịhụnanya.
Ka o sina dị, ebumnuche nke ụbọchị nne na Russia bụ ịkwalite ụkpụrụ ezinụlọ na mkpa miri emi ịhụnanya ndị nne nwere n'ebe ụmụ ha nọ na nke ọzọ.
Kedu ka ụbọchị nne si bido?
Anyị nwere ike ịchọta mmalite nke ụbọchị nne na Gris oge ochie ihe karịrị afọ 3.000 gara aga mgbe a na-eme ememme maka nsọpụrụ nke Rea, nne chi nke titanic dị ka Zeus, Hades na Poseidon.
Akụkọ banyere Rea na-akọ na o gburu di ya Cronos iji chebe ndụ nwa ya nwoke bụ Zeus, n'ihi na ọ taa ụmụ ya mbụ ka a ghara ịkwatu ya n'ocheeze dịka o mere nna ya Uranus.
Iji gbochie Cronos iri Zeus, Rea chepụtara atụmatụ wee gbanwee nkume nwere akwa bekee ka di ya rie, na-ekwere na ọ bụ nwa ya nwoke mgbe ọ na-etolite n'ezie n'àgwàetiti Krit. Mgbe Zeus ghọrọ okenye, Rea jisiri ike mee ka Crono drinkụọ ọgwụ nke mere ka ụmụaka ndị ọzọ gbụpụ.
N'ihi ịhụnanya o nwere n'ebe ụmụ ya nọ, ndị Grik kwanyeere ya ùgwù. Mgbe e mesịrị, mgbe ndị Rom weghaara chi ndị Greek ha nabatakwara ememe a ma mee n'etiti onyinye Machị maka chi atọ na chi nwanyị Hilaria n'ụlọ nsọ Cibeles na Rome (na-anọchite anya ụwa).
Ka oge na-aga, ndị Kraịst gbanwere ezumike a nke ndị ọgọ mmụọ ka ọ bụrụ nke ọzọ iji sọpụrụ Meri Nwaanyị, nne Kraịst. Na ndị nsọ Katọlik na Disemba 8 a na-eme emume nchepụta, ụbọchị nke ndị a kwesịrị ntụkwasị obi nakweere iji cheta Motherbọchị Ndị Nne.
Ugbua na narị afọ nke 1914, onye isi ala nke United States Woodrow Wilson kpọsara na XNUMX Sọnde nke abụọ nke Mee dị ka Motherbọchị Ndị Isi nke ụbọchị, ngosipụta nke a kwughachiri n'ọtụtụ mba ndị ọzọ nke ụwa. Agbanyeghị, ụfọdụ mba nwere ọdịnala Katọlik gara n'ihu na-echekwa ezumike na Disemba ọ bụ ezie na Spain kewapụrụ ya iji bugharịa ya na Sọnde mbụ na Mee.
Kedu mgbe a na-eme ncheta ụbọchị nne na mba ndị ọzọ?
Obodo a na-eme ncheta ụbọchị nne na Sọnde nke abụọ na Mee. Onye izizi mere ya etu anyị siri mata na ọ bụ Anna Jarvis na asọpụrụ nne ya nwụrụ na Mee 1908 na Virginia. Mgbe e mesịrị, ọ gbara mgba iji guzobe ụbọchị nne dị ka ezumike mba na United States, ma kwupụta ya n'ụzọ a na 1910 na West Virginia. Ndị ọzọ steeti ga-agbaso ngwa ngwa.
Na France, Motherbọchị Ndị Nne bụ ọdịnala kachasị ọhụrụ, ebe ọ bụ na ọ malitere ime ya na XNUMXs. Tupu nke ahụ, ụbọchị ole na ole mgbali nke ụmụ nwanyị ụfọdụ mụrụla ọtụtụ ụmụaka iji nyere aka weghachite ọnụ ọgụgụ ndị bi na mba ahụ mgbe Agha Ukwu ahụ gasịrị ka amatagogoro na ọbụnakwa nye akara nrite.
Ugbu a, a na-eme ya na Sọnde ikpeazụ na Mee ọ gwụla ma ọ dabara Pentikọst. Ọ bụrụ otu a, Motherbọchị ndị nne na-ewere ọnọdụ na Sọnde mbụ na June. N’agbanyeghi ubochi, ihe omenala bu ka umuaka nye ndi nne ha achicha dika ifuru.
N’obodo Eshia a, Motherbọchị Ndị Nne bụkwa emume dị ọhụụ, mana ọtụtụ ndị China na-eji onyinye na ọ ofụ dị ukwuu esoro ndị nne ha eme emume Sọnde nke abụọ na Mee.
Isbọchị nne na-eme ncheta na Mexico jiri ịnụ ọkụ n'obi na ọ bụ ụbọchị dị mkpa. Ememme ahụ na-amalite ụbọchị tupu ụbọchị ahụ bụ ọdịnala ụmụaka ka ha na-elekọta nne ha ma ọ bụ nne nne ha, site na onwe ha ma obu site na igo ndi oru egwu.
N’ụbọchị na-eso ya ka a na-eme nzukọ ụka pụrụ iche ma ụmụaka na-enye ndị nne ha onyinye ha mepụtara n’ụlọ akwụkwọ.
A na-ahụta nne nne eze Thailand, eze ya Sirikit, bụrụ nne nke ndị Thai niile gọọmentị mba ahụ emeela ụbọchị ncheta ụbọchị nne ya (ụbọchị iri na abụọ nke ọnwa Ọgọstụ) kemgbe afọ 12. Ọ bụ ụbọchị ezumike mba nke eji eji ọkụ na ọtụtụ kandụl eme ya.
Motherbọchị nne na Japan nwetara nnukwu ewu ewu mgbe Agha IIwa nke Abụọ gasịrị ma na-eme ugbu a na Sọnde nke abụọ na Mee.
Ememe a na-ebi ndu n’ụzọ nke ụlọ na nke ọdịnala. Mụaka na-ese foto nne ha, kwadebe efere ha kụziiri ha esi nri ma nyekwa ha carnations pink ma ọ bụ ọbara ọbara ka ha na-egosipụta ịdị ọcha na ụtọ.
Motherbọchị ndị nne na UK bụ otu n'ime ezumike ochie na Europe. Na narị afọ nke iri na isii, a na-akpọ Sọnde nke anọ nke ụbọchị Lenti ka a na-akpọ Sọnde Nneọma maka nsọpụrụ nke Virgin Mary. na ezinaụlọ jiri ohere ahụ wee zukọọ, gaa n'ọchịchị ma nọdụ ụbọchị.
N'ụbọchị a pụrụ iche, ụmụaka na-akwadebe nne ha maka onyinye dị iche iche, mana enwere nke a na-agaghị echefu: Simnel Cake, achicha mkpụrụ osisi na-atọ ụtọ nke nwere mkpụrụ almọnd n'elu.
Portugal na Spain
Na Spen na Portugal, a na-eme Emume Motherbọchị Ndị Nne na Disemba 8 maka emume nchepụta echiche ma e mechara kewaa ya na mmemme abụọ ahụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Njem zuru oke » Motherbọchị nne na Russia